IMT Vislink iyo SpacePath Co-Bandit ee AfrikaCom 2018 - NAB Show News by Waraysashada. Wargeyska rasmiga ah ee NAB Show, Soo-saaraha NAB Show LIVE
Home » News » IMT Vislink iyo SpacePath Co-Bandit ee AfricaCom 2018
IMT Vislink iyo SpacePath Co-Bandit ee AfricaCom 2018
CAPE TOWN, SOUTH AFRICA, NOVEMBER 7, 2018 - xG® Technology, Inc. ( "XG") (Nasdaq: XGTI, XGTIW), oo magacooda loo aqoonsan yahay hoggaamiyeyaasha caalamiga ah ee isgaarsiinta fiidiyoowga ah ee isgaarsiinta, suuqa iyo militariga, ayaa ku dhawaaqay in ganacsigeeda IMT Vislink ay la wadaagto SpacePath at AfricaCom (Hall 4, Stand F21), tiknoolijiyada ugu saameynta badan iyo kuwa ugu saameynta badan ee ku saabsan qaaradda. IMT Vislink waxay soo bandhigeysaa Advent MSAT-120 satellite video iyo xogta qadka iyo ViewBack qadar yar ee kanaliyaha kala duwan ee duuliyaha-codbixiyaha, halka SpacePath ay muujinayso xoogag sare oo awood leh (HPAs) iyo awood yar oo awood xoog leh (SSPA / SSPBs).
"AfricaCom waxay isu keeneysaa agagaarka 14,000 ee xiiseynaya kaabayaasha isku xirka, teknoolajiyada khalkhalka, adeegyada digital iyo istaraatejiyadda ICT, taas oo ka dhigaysa bandhig weyn si aan u muujinno satellite wax soo saarka xirfadlayda deegaanka, "ayuu yiri David Robins, Agaasimaha Sales Global for IMT Vislink. "Vislink wuxuu leeyahay sumcad dheer oo ah bixiye caalami ah satellite teknoolajiyada isgaarsiinta iyo casriyeynta dhowaan la soo dhaafay ee Advent line, waxay sii wadaan inay bixiyaan xalal farsameysan, oo isku dhafan oo kharash yar ku habboon suuqa. Isaga oo la wadaagaya SpacePath, waxaan sidoo kale fursad u helaynaa inaan soo bandhigno dalabkayaga wax soo saar ee wadajirka ah ee gudaha Advent MSAT-120 satellite terminal. "
Advent MSAT-120 waa mid si weyn loo qaadi karo, khafiif ah, saddex-gees satellite terminal ah oo la dhisi karo meel kasta si loo bixiyo xog sugan oo aan amaan ahayn iyo fiidiyoowyo fiidiyoow ah illaa shan daqiiqo. Waxay taageertaa qaababka X-, Ku-iyo Ka-xir-xirka ah ee hubineysa in caymiska dunida oo dhan la heli karo mar kasta. Waxaa la heli karaa 65, 90 ama Reform 120cm, nidaamka waxaa loogu talagalay in si deg deg ah loo geeyo goobaha colaadaha ah waxaana loo isticmaali karaa awoodda korantada ama howlgalka batteriga.
Waxay ku jirtaa Xarunta Macmiilka MSAT-120, SpacePath's 60W 13.75-14.50GHz SSPA ayaa lagu muujin doonaa bandhigga. Sidoo kale, SpacePath ayaa bilaabi doonta cusub oo dibadda ah 12W 13.75-14.50GHz Fanless SSPB. Lahaanshaha taageerayaasha dhismaha badeecada, SSPB-kooda cusub waxay kordhisaa kalsoonida muddada dheer ee cutubka waxayna yareysaa baahida loo qabo dayactir joogto ah. SpacePath ee noocyada awoodda xoogga leh ee awoodda xoogga leh ee awoodda yar, oo ay ku jiraan kooxo badan sida C, Ku, DBS iyo Ka ayaa sidoo kale lagu soo bandhigi doonaa sidoo kale.
"Dhacdadani waxay na siinaysaa fursad gaar ah si aan u muujinno noo cusub satellite Qalabka amplifier iyo nidaamyada hoose ee gobolka, "ayuu yiri Colin Bolton, Agaasimaha SpacePath Communications. "Wadashaqeynteena la leh IMT Vislink waxay ka faa'iideysaneysaa tiknoolajiyadda ugu dambeysa ee labada urur."
Vislink ViewBack waa miisaan yar, awood hooseeya, hooseeya, laydin yar, kan kala duwan ee laba-kanalbood ee kala-qaada-codbixiyaha, oo loogu talagalay in lagu bixiyo soo-celinta fiidiyowga soo-celinta fiidiyoowga ku soo celinta telefoonka gacanta. Ku shaqeysiga 2GHz-shati-haysta, qaadaha wuxuu taageersan yahay Vislink's hirgelin adag oo LMS-T ah oo lagu daray mashiinka H.264 oo hooseeya. Natiijooyinka waxaa ka mid ah HDMI iyo HDSDI, kan dambe ayaa lagu bedeli karaa, codsiyada kamaradaha wireless, inta u dhexeysa video-ka kamarad maxaliga ah iyo soo-celinta la helay video.
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan IMT Vislink iyo SpacePath, joojiya Stand F21 at AfricaCom ama booqo www.imt-solutions.com, www.vislink.com/ or www.space-path.com/.
noocyada xG Technology ee xal video wireless baahinta, fulinta sharciga iyo suuqyada difaaca, iyo shabakadaha gaarka loo leeyahay broadband mobile si loogu isticmaalo deeganada adag. xG ee faylalka brand ka mid ah Integrated Mikrada Technologies (IMT), Vislink iyo xMax.
IMT iyo Vislink ayaa ah kuwa ugu horreeya ee bixiya nidaamyada microwave-ga ee horumarsan, si loo qabsado, loona gudbiyo loona maamulo amniga, tayada sare leh, video-ku nool. IMT iyo Vislink waa kuwa lagu kalsoon yahay ee alaabooyinka-1 macaamiisha caalamiga ah ee warbaahinta / cayaaraha / madadaalada, iyo fulinta sharciga / nabadgelyada guud / suuqyada difaaca. Alaabtoodu waa la aqoonsan yahay heerarka sare ee waxqabadka, kalsoonida, dhisidda tayada, kala duwanaanshaha hawlaha iyo qaababka iswada. Marka laga hadlayo warbaahinta, isboortiska iyo madadaalada, IMT iyo Vislink waxay bixiyaan isku xirnaanta isgaadhsiinta sare ee si qumman loo ururiyo loona qaybiyo dhacdooyinka dhacdooyinka nool. Hirgelinta sharciga, nabadgelyada dadweynaha iyo sahayda difaaca, IMT iyo Vislink waxay bixiyaan xariir la isku haleynayo video iyo xalal muhiim u ah hay'adaha maxalliga ah, qaranka iyo kuwa caalamiga ah. Macluumaad dheeraad ah ayaa laga heli karaa www.imt-solutions.com iyo www.vislink.com.
xMax waa, ciidamo deg deg ah-nidaam adag oo ilaashan mobile internet oo keena isku xirnaanta wireless mission-xaqiijiyay in dalbanayaan deegaan ka hawlgala. xMax waxaa si gaar ah loogu tala galay inay u adeegaan sida network isgaarsiinta Expeditionary oo muhiim ah si loogu isticmaalo xaalado aan la saadaalin karin iyo inta lagu jiro xaaladaha dheecaanka. Tani waxa ay xal kalifaya jawaab musiibo, isgaarsiinta degdegga ah, iyo codsiyada difaaca ka dhigaa. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan xMax waxaa laga heli karaa www.xgtechnology.com/system-overview/. Waxa intaa dheer in khadadka ganacsiga ku xusan, xG ayaa heegan ah Sector Group Federaalka (xG Federaalka) waxay diirada saaraysaa bixinta jiilka soo socda xal spectrum qaybsiga in difaaca qaranka, cilmi sayniska iyo hay'adaha kale ee dawladda dhexe. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan xG Federaalka waxaa laga heli karaa www.xgtechnology.com/technology/xg-federal/.
Iyada oo ku saleysan in Sarasota, Florida, xG Technology leedahay in ka badan 100 shatiyada iyo codsiyada patent sugayo. xG waa shirkad si cad kaga baayacmushtari ku qoran NASDAQ Market Capital (calaamad: XGTI) Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan booqo www.xgtechnology.com.
Bayaanka uga digayna saabsan Statements Forward Raadinta
Statements, taasina ku jira aan ku saleysan xaqiiqda hadda ama taariikhiga ah waa mustaqbalka eegaya ee dabiiciga ah iyo ka koobnaan statements gudahood macnaha Section 27A ee Xeerka Securities ee 1933 iyo Section 21E ee Xeerka Securities Exchange ee 1934 mustaqbalka eegaya. statements mustaqbalka eegaya noocan oo kale ah ka tarjumayaan filayo Company ee ku saabsan natiijooyinka hawlgalka mustaqbalka, waxqabadka iyo fursadaha ku lug leh khatarta la taaban karo iyo hubin. statements waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn statements la xiriira shuruudaha loogu tala galay ee qurbaanka la, ku dhow oo ka mid ah qurbaan iyo isticmaalka kasta oo soo baxa ka qurbaanka. Marka, taasina loo isticmaalo, erayada "rajayn," "rumays," "qiyaasta," "soo socda," "Qorshaha," "bartilmaameed", "damacsan" iyo "filan" iyo weedho la mid ah, sida ay ula xidhiidhaan xG Technology, Inc. , kuwii shuraakada, ama ay maamulka, waxaa loogu talo galay in la ogaado statements mustaqbalka eegaya sida. Kuwani statements mustaqbalka eegaya ku salaysan yihiin macluumaadka hadda la heli karo si Company iyo waxaa waajib ah in tiro ka mid ah khataraha, hubin, iyo arrimo kale oo keeni kara in shirkadda dhabta ah natiijada, waxqabadka, rajada, iyo fursadaha ay u huba uu ka duwan kuwa ka muujiyay in, ama by maldahan, keebaa mustaqbalka eegaya.
Broadcast Engineer Broadcast Engineering IMT Vislink Spears & Fiilooyinka Video Engineer	2018-11-07
Previous: EditShare Media Solutions Awood cusub oo cusub LG U + Entertainment oo bixiya "Bandhigga"
Next: Engineer Qodob
Hey Buddy !, waxaan ka helay macluumaadkan adiga: "IMT Vislink iyo SpacePath Co-Exhibit at AfricaCom 2018". Waa halkan bogga internetka: https://www.broadcastbeat.com/imt-vislink-and-spacepath-co-exhibit-at-africacom-2018/. Mahadsanid.